IArdor 6.5 ifika kunye nokulungiswa kwempazamo ebalulekileyo kwiArdor 6.4 nangaphezulu | Ubunlog
IArdor 6.5 ilapha kunye nokulungiswa kwe-bug ebalulekileyo kwiArdor 6.4 nangaphezulu
Mva nje ukumiliselwa kwe Inguqulelo entsha yomhleli wesandi sasimahla Isixhobo 6.5 Eyilelwe ukurekhodwa kwesandi kwimigangatho emininzi, ukuqhubekeka kunye nokudibanisa
Ekuqaleni inguqulelo ekufuneka inikezelwe yayingu Inguqulelo ye IArdor 6.4, kodwa yathathelwa indawo ngohlobo 6.5 kwiiyure ezimbalwa ngenxa yengxaki ebalulekileyo echongiweyo.
Kulabo abangaqhelekanga ngeArdor, kuya kufuneka uyazi ukuba esi sicelo Yenzelwe ukurekhoda amajelo amaninzi, ukuqhubekeka kwesandi kunye nokudibanisa. Kukho umda wexesha le-multitrack, inqanaba elingenamda lokutshintsha utshintsho ekusebenzeni nefayile (nasemva kokuvala inkqubo), inkxaso yokwahluka kweendlela zonxibelelwano.
Inkqubo ibekwe njenge-analog yasimahla yeProTools, iNuendo, iPyramix kunye nezixhobo zobuchule zeSequoia. Ikhowudi yeArdor 6.5 isasazwa phantsi kwelayisensi yeGPLv2.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeArdor 6.5
2 Uyifaka njani iArdor kwi-Ubuntu kunye neziphumo?
Iimpawu ezintsha eziphambili zeArdor 6.5
Le nguqulo intsha yeArdor 6.5 iza notshintsho olubalulekileyo, phakathi kwabo isisombululo kwimpazamo ebalulekileyo yeyiphi u-6.4 othathe indawo yakhe emva kweeyure ezimbalwa ethintela iseshoni ekubeni ithunyelwe ngaphandle.
Ngokubhekisele kutshintsho olutsha olwahlukileyo, sinokulufumana Uphuculo oluphambili kuhlobo olutsha kukuxhasa iiplagi kwifomathi yeVST3, iphuhliswe yiSteinberg Media Technologies kwaye isetyenziswa kwiinkqubo zokulungisa izandi zobuchwephesha ukudibanisa izixhobo zesoftware kunye nezandi.
ngaphandle koko iiplagi ziyahambelana neLinux, Windows kunye neMacOS.
Ukuphunyezwa kwe I-VST3 ikwagubungela ulwandiso lukaPresonus isetyenziswe kwi-plug-ins yeSoftube Console1 kunye neepaneli zolawulo lweaudiyo.
Olunye uphuculo lubandakanya inkxaso yeJACK1 kunye neJACK2 kwiindibano zeWindows, kukhawuleze kakhulu ukuboniswa kwazo zonke iindlela ezizenzekelayo ze-MIDI.
Kwaye iifayile I-WAV kunye ne-AIFF ngoku zinokubandakanya iithegi zemethadatha iseshoni (kusetyenziswa iithegi ze-id3v2 kunye nolwazi lweWAV).
Okokugqibela, ngokubhekisele kulungiso lwebug:
Imicimbi ye-MIDI ngaxeshanye ihlelwe ngokuchanekileyo.
Kuqwalaselwe isikhuseli se-MIDI xa siphuma kwindawo engenanto.
Ukulungiswa kwe-bug imeko enqabileyo kodwa ebalulekileyo kuhlobo lwekhowudi esetyenziselwa ukulawula ukwakheka kweedatha ezahlukeneyo ngexesha lokwenyani.
Ukuphathwa kweebhithi zomculo phakathi kwe-0 kunye ne -1 beats kwalungiswa.
Ukuphathwa okungagungqiyo kwamazibuko olawulo lwezothutho xa utshintsha iiseshoni.
Ukuthunyelwa kwangaphandle okuthe ngqo / i-sidechain solo isasazeka.
Indawo esisigxina yesikhombisi kunye nombala wombhalo xa uhlela iiwotshi.
Ukulungiswa kokubuyiselwa okungagungqiyo xa kulayishwa iseshoni.
Kwenziwe ulungiso kwifestile apho umhleli / iplagi ye-GUI idada xa usebenzisa iwindow yomxube eyahlukileyo.
Ukulungiswa kwesayizi yefestile yeAudioUnit kwezinye iiplagi ezingenakulinganiswa.
Ukulungiswa kwemicimbi eyahlukeneyo xa usebenzisa i-MIDI kwi-ARM (Raspberry Pi).
Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqha kunye nokusebenza kwemozulu
Bandakanya ukubalwa kwesitishi esiphambili xa kugxothwa imveliso
Isidlali sediski kunye nokuphuma kwenethiwekhi akusakhubazekanga xa ubanda umkhondo
Imitha ayihoywa xa kubalwa amajelo
Okokugqibela, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngale nguqulo intsha ikhutshiweyo okanye malunga nesoftware, ungajonga utshintsho kunye nokufumana ulwazi oluthe kratya kwiwebhusayithi esemthethweni.
Uyifaka njani iArdor kwi-Ubuntu kunye neziphumo?
Kulabo banomdla wokukwazi ukufaka iArdor kwinkqubo yabo, kufuneka bazi ukuba iphakheji ingaphakathi oovimba bolwabiwo oluninzi, ilungele ukufakwa, nje ngeenkcukacha zokuba isenokungabi lolona hlobo lwangoku kwaye ngaphandle kwalonto kuphela ingxelo yovavanyo.
Kwimeko yoBuntu kunye neziphumo, iphakheji iphakathi koovimba.
Xa sele nditshilo, Ukuba ufuna ukuvavanya isicelo ndikushiyela imiyalelo yofakelo.
Ukuze ukwazi faka iArdor kwiDebian, Ubuntu kunye neziphumo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » IArdor 6.5 ilapha kunye nokulungiswa kwe-bug ebalulekileyo kwiArdor 6.4 nangaphezulu
Iseti yentloko, faka esi sidlali-mculo nguSnap okanye iPappak
I-MPV 0.33 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo